pokhara | Ratopati
पोखराका अस्पतालमा घुमाउँदा घुमाउँदै बिरामीको ज्यान गयो access_timeमंसिर ११, २०७७
पोखरा । देशकै सुविधा सम्पन्न सहर पोखराका अस्पतालमा घुम्दाघुम्दै उपचार नपाएर एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ काँडेमा बसोबास गर्दै आएका राजेश कार्कीको अस्पतालमा घुम्दाघुम्दै बुधबार राती ज्यान गएको हो । अस्पताल पुगेका कार्कीको अस्पतालले भर्ना लिन...
पोखराको मौसम त खुल्यो तर खुलेन पर्यटन व्यवसायीको मन access_timeमंसिर २, २०७७
–जमुनावर्षा शर्मा पोखरा । मौसमले यतिबेला निकै साथ दिएको छ पोखरालाई । टलक्क टल्केको माछापुच्छ्रे हिमालको छायाँ फेवातालमा निकै आकर्षक देखिन्छ । पहिलो पटक आउने हुन् या पटक–पटक यो दृश्य देख्दा उनीहरुबाट निस्किने पहिलो शब्द हो “वाउ पोखरा” पोख...
चरा पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै आकर्षक छ पोखरा access_timeकात्तिक २३, २०७७
–वासुदेव पौडेल कास्की । पर्यटकीय नगरी पोखरा तालैतालको शहर हो । यहाँका नौओटा ताल रामसारमा सूचीकृत छन् । पोखराको बीच भाग भएर बग्ने सेती नदी, फुस्रेखोला हुँदै दक्षिण भेगस्थित सुरौदी लगायतका खोलानाला महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्र हुन् । पोखरा आसपासका क्षेत्रका साथ...
६ महिनापछि पोखरामा विमान उड्दै, यसरी हुँदैछ उडान तयारी (फोटोफिचर) access_timeअसोज ४, २०७७
पोखरा । झण्डै ६ महिना लामो लकडाउनपछि भोलिदेखि आन्तरिक उडान सञ्चालन हुँदैछ । असोज एक गतेदेखि नै सञ्चालन अनुमति पाएका विमान भोलिदेखि सञ्चालन हुने भएका हुन् । उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कता, सामाजिक दूरी र डिसइन्फेक्सन लगायतका मापदण्ड पालना गर्दै उडान सञ्चाल...
पोखरा महानगरका ३ वडाका टोल राती १२ बजेदेखि सिल हुने access_timeभदौ १९, २०७७
पोखरा । पोखरा महानगरका ३ वटा वडाका विभिन्न स्थल सिल हुने भएको छ । शुक्रबार तीनै वडाका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राती १२ बजेदेखि नै लागू हुने गरि एक हप्तासम्मको लागि वडाका विभिन्न टोलहरु सिल गर्ने घोषणा गरेको हो । सूचनाअनुसार वडा नम्बर १०, १२...
पोखराबाट गाँजासहित २ जना पक्राउ access_timeभदौ १५, २०७७
काठमाडौँ । पोखराबाट प्रहरीले लागुऔषध गाँजासहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तनहुँ शुक्लागण्डकीका २३ वर्षीय संजोक विक र कास्की पोखराका २० वर्षीय शिलाष विकलाई पक्राउ गरेको हो । अवैध लागुऔषध गाँजा ओसारपसार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरु...
‘लकडाउन’का बीच सरकारी जग्गामा धमाधम संरचना विस्तार ! access_timeभदौ १५, २०७७
पोखरा । कोरोना प्रकोपले देश यतिबेला आक्रान्त छ । संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । औषधी निर्माणको होडमा सारा विश्व लागेको छ । तीनै तहका सरकार पनि यतिबेला कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनमा लागेका छन् । यही मौका छोपेर पोखरामा सरकारी जग्गामा संरचना विस्तार गरेको पा...
पोखराको कोरोना अस्पतालमा पनि एक संक्रमितको मृत्यु access_timeभदौ १२, २०७७
पोखरा । पोखरामा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हिजो मात्रै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको कोरोना अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको थियो । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि आजै उपचारको लागि अस्पताल आएक...
पोखराका होटललाई ‘पे­आइशोलेशन’ बनाउने तयारी access_timeभदौ ८, २०७७
पोखरा । कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै जाँदा आइसोलेशन वार्डको अभाव हुनसक्ने भन्दै महानगरपालिकाले पोखराका केही होटललाई ‘पे­आइशोलेशन’को रुपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले लक्षणबिना सङ्क्रमण देखिएका र अस्पताल लानु पर्ने अ...
कास्कीमा निषेधाज्ञा नहटाऊः काँग्रेस access_timeभदौ ७, २०७७
कास्की । नेपाली काँग्रेस कास्कीले कास्कीमा निषेधाज्ञा नहटाउन माग गरेको छ । कास्की काँग्रेसका सभापति कृष्ण केसीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा कोरोना सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको भन्दै तत्काल निषेधाज्ञा नहटाउन माग गरिएको हो । निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन कष्टकर भएपनि स्वा...
निषेधाज्ञा तोड्दै गुडेको गाडीले ठक्कर दिँदा प्रहरी जवान र हवल्दारको मृत्यु access_timeभदौ ३, २०७७
पोखरा । पोखरामा गस्तीमा खटिएका प्रहरी टोलीलाई बोलेरोले ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएका प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर बगाले मगर र हवल्दार डम्बरबहादुर थारुको मृत्यु भएको हो । प्रहरी जवान बगालेले चलाएको मोटरसाइकललाई पछाडिबाट आएक...
पोखरामा २ जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु access_timeभदौ २, २०७७
कास्की । पोखरामा उपचारका क्रममा २ जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कास्की र तनहुँका एक/एक जना छन् । पोखरा महानगरपालिका–१६ का ८७ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा आज बिहान १०ः४० बजे पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्री...
पोखराका मेयरलाई जनताको प्रश्न- १३ करोड खै ? access_timeसाउन २५, २०७७
पोखरा । पोखरा महानगरमा यतिबेला १३ करोड रुपैयाँ हराएको काण्डले चर्चा पाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम बेरुजु देखाएपछि महानगरमा अनियमितता भएको तथ्य प्रकाशमा आएको हो । आईतबार पोखराका केही युवाले मेयर मानबहादुर जिसीसँग १३ करोडको हिसाब मागे...
गण्डकी प्रदेशमा जोरबिजोर लागू नहुने access_timeसाउन २२, २०७७
कास्की । कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखी आजदेखि लागू भएको जोरबिजोर प्रणाली गण्डकीमा लागू नहुने भएको छ । सरकारले २०० जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा यो नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा २०० को सङ्ख्यामा सक्रिय सङ्क्रमित नभ...
पर्यटक स्वागतको पर्खाइमा पोखराका होटल access_timeसाउन १८, २०७७
गण्डकी । हिमाल आरोहणको इतिहासमा पहिलोपटक सन् १९५० जुन ३ मा अन्नपूर्ण प्रथमको सफल आरोहण गरेको फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हर्जोगको टोली आरोहणमा जाँदा र आउँदा त्यस टोलीका सदस्यहरु पोखरा बास बसेका थिए । त्यस समयमा पोखरामा त्यस्तो पर्यटकीय पूर्वाधार केही बनिसकेको...
होटल सञ्चालनको तयारीमा पोखराका पर्यटन व्यवसायी access_timeसाउन १३, २०७७
कास्की । लामो समयको बन्दाबन्दीपछि साउन १५ देखि पोखराका पर्यटन व्यवसायी होटल सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकारले साउन १५ देखि होटल सञ्चालनको अनुमति दिएसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायी होटल सञ्चालनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घले जनाएको छ । सङ्घ...
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा ३ जनाको ज्यान गयो access_timeसाउन २, २०७७
पोखरा । कास्कीमा पहिरो जाँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ८ खोराकोमुखमा गए राती पहिरो जाँदा ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी सुवास हमालका अनुसार प्रेमराज विकको घरमा पहिरो खस्दा ३...
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत ६ जनाले जिते कोरोना access_timeअसार ३०, २०७७
पोखरा । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञानको आइसोलेसन कक्षमा उपचाररत ६ जनाले कोरोना जितेका छन् । कास्कीका ५ र स्याङ्जाका १ गरि ६ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका हुन् । थप ६ जनाले कोरोना जितेर घर फकिएसँगै गण्डकीमा कोरोना जित्नेको संख्या ७ सय ८५ पुगेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्...